उद्यम वस्तुहरूमा गैर बुनेका वातावरणीय संरक्षण ब्यागहरूको प्रभाव के हो?
उद्यम वस्तुहरूमा गैर बुनेका वातावरणीय संरक्षण ब्यागहरूको प्रभाव के हो? गैर बुना पर्यावरण संरक्षण बैग एक प्रकारको प्याकेजि bag्ग बैग हो जुन गैर बुनेका कपडाहरूले बनेको हुन्छ। यो एक प्रकारको बाह्य फार्म विशिष्टता र उत्पादको समग्र छविको सुदृढीकरण हो। यो एक प्रकारको ओ हो ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुनेका कपडा बनाउने झोलाको मोटाई कसरी छुट्याउने?
गैर बुनेका कपडा बनाउने झोलाको मोटाई कसरी छुट्याउने? गैर बुने कपडाको उत्पादनमा, कहिलेकाँही गैर बुनेका कपडाहरूको मोटाई असमान हुन्छ। के भयो? तलका गैर बुनेका कपडाहरूको असमान मोटाईको सम्भावित कारणहरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि निम्नलिखित छ ...थप पढ्नुहोस् »
कारक गैर बुनेको झोलाको मूल्य गणनामा विचार गर्न
कारक गैर बुनिएको झोला को मूल्य गणना मा विचार गर्न के कारकहरु गैर बुना बैग को मूल्य गणना मा विचार गर्नु पर्छ? अब त्यहाँ धेरै अनुकूलित गैर बुनेका झोलाहरू छन्। धेरै उत्पादकहरू र स्टोरहरूले गैर बुनेका ब्यागहरू अनुकूलित गर्न आवश्यक छ, कि त उनीहरूको आफ्नै उत्पाद ब्रान्डको प्रचार गर्नको लागि ...थप पढ्नुहोस् »
ननवेन बैगको मूल्यलाई असर गर्ने कारकहरू
पोष्ट समय: अप्रिल २ 25-२०१२
गैर बुने झोलाको मूल्यलाई असर गर्ने कारकहरू पोस्ट समय निर्माण: नोभेम्बर ०२, २०११ १ 13::3 comments टिप्पणीहरू: १ ब्राउज: १55 योगदान आजको चीनमा कम कार्बन अवधारणाको गहिराइका साथ वातावरणीय संरक्षण झोलाहरूको माग बढिरहेको छ। बजार शेयर जफत गर्न को लागी, मानिस ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुनेका झोलाहरूको संख्या थोरै छ, जसले लागत बढाउँदछ!
पोष्ट समय: अप्रिल २ 24-२१२
गैर बुनेका झोलाहरूको संख्या थोरै छ, जसले लागत बढाउँदछ! आजकल, उत्पाद अनुकूलन जीवनको सबै क्षेत्रहरुमा मूलधारको तरीका भएको छ। गैर बुने झोलाहरू पनि समावेश छन्। यद्यपि मागकर्ताहरूको लागि अनुकूलनको दुबै फाइदाहरू र बेफाइदाहरू छन्। तपाई किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ? Zhdbag, एक pr के रूप में ...थप पढ्नुहोस् »
किन साना बैच गैर बुना थैलाको एकाई मूल्य बढी छ?
पोष्ट समय: अप्रिल २ 23-२१२
किन साना बैच गैर बुना थैलाको एकाई मूल्य बढी छ? धेरै ग्राहकहरु यो कुरा थाहा पाउँदा छक्क पर्दछन् कि हाम्रो उद्धरण 5000००० गैर बुनेको झोलाको एकाई मूल्य भन्दा यति धेरै छ कि जब म १००० गैर बुनेका थैलीहरू अर्डर गर्दछु? हजारौं ब्यागको एकाई मूल्यको साथ ठूलो भिन्नता छ, त्यसैले हामी सोच्छौं ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुनेका वातावरणीय संरक्षण ब्यागको कपडाको गुणस्तर कसरी पहिचान गर्ने?
पोष्ट समय: अप्रिल -२२-२०१।
गैर बुनेका वातावरणीय संरक्षण ब्यागको कपडाको गुणस्तर कसरी पहिचान गर्ने? कसरी गैर बुने कपडा पहिचान गर्ने? सबै भन्दा पहिले, हामीले यो जान्नु आवश्यक छ कि गैर-बुनेको झोलाको सामग्री स्वाभाविक रूपमा गैर बुनेको छ, यसलाई गैर बुनेको पनि भनिन्छ। तर हामी यसलाई सामान्यतया गैर बुनेको भन्ने गर्छौं। आजको गैर बुनेको बजारमा, ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुनेको झोला र कागजको झोला बीच के भिन्नता छ?
गैर बुनेको झोला र कागजको झोला बीच के भिन्नता छ? हामी प्राय: दुई किसिमका झोलाहरू देख्छौं, एउटा गैर बुनेको कपडा हो; एउटा कागज हो। गैर बुने कपडा गैर बुना बैग, गैर बुना बैग, गैर बुनेको शपिंग बैग, आदि मा विभाजित गर्न सकिन्छ कागज पोर्टेबल सेतो गत्ता झोला, कपडा मा विभाजित गर्न सकिन्छ ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुनेको शपिंग ब्याग र कागज ब्याग सामग्री भन्दा कुन राम्रो छ?
गैर बुनेको शपिंग ब्याग र कागज ब्याग सामग्री भन्दा कुन राम्रो छ? १ non गैर बुने शपिंग ब्यागको पुन: प्रयोज्यता। गैर बुने शपिंग ब्यागको फाइदा यो हो कि यो धेरै पटक पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ। कागजको झोला मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, र कारखानाको मूल्य गैर बुनेका शपिंग बी भन्दा उच्च छ ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुने बैगमा कसरी शव्दहरू छाप्ने?
पोष्ट समय: अप्रिल १ -20 -२०१२
गैर बुन्ने बैगमा कसरी शव्दहरू छाप्ने？ अब धेरै ग्राहकहरूले गैर-बुनेको ब्यागहरू आफ्नै कम्पनी वा संस्थाको लोगो र पाठ प्रिन्ट गरेर अनुकूलित गर्छन्। लोगोहरूलाई निम्न विधिहरूद्वारा गैर बुनेका ब्यागहरूमा मुद्रण गर्न सकिन्छ: १. रेशम स्क्रिन प्रिन्टि This यो प्रिन्टिंगको साधारण तरीका हो, मूल्य मध्यम छ, त्यसैले मीटर ...थप पढ्नुहोस् »
गैर बुने बैगको जीवन कसरी सुधार गर्ने?
पोष्ट समय: अप्रिल १ 18-२२१
गैर बुने बैगको जीवन कसरी सुधार गर्ने? आजकल यस प्रदूषणमुक्त समाजमा वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने प्लास्टिक झोलाहरूको सट्टा गैर बुनेका शपिंग ब्यागहरू लोकप्रिय छन्। जे होस्, यस प्रकारको झोला बजारमा बेचिन्छ केही शपिंग ब्यागबाट अनिवार्य रूपमा भिन्न छ, सामान्यतया, यदि त्यहाँ ...थप पढ्नुहोस् »
कस्ता प्रकारको टेक्नोलोजी गैर बुनिएको झोला कश्मीरी स्वेटरको लागि प्रयोग गरिन्छ?
पोष्ट समय: अप्रिल १ 17-२१२
कस्ता प्रकारको टेक्नोलोजी गैर बुनिएको झोला कश्मीरी स्वेटरको लागि प्रयोग गरिन्छ? गैर बुने कपडाको झोला सामान्यतया कश्मीरी स्वेटर समात्न प्रयोग गरिन्छ। एक तर्फ गैर बुने कपडा हो, अर्को पक्ष पीवीसी हो वा ती सबै गैर-बुना कपडाका सामग्री हुन् त्यहाँ एक प्रकारको कश्मीरी स्वेटर झोला पनि छ, जुन जीन हो ...थप पढ्नुहोस् »